प्रधानमन्त्री र शेखरबीच भेट : सिके र संघीयताको वारे अनेक प्रश्न – समावेशी
प्रधानमन्त्री र शेखरबीच भेट : सिके र संघीयताको वारे अनेक प्रश्न
शुक्रबार, मंसिर ०७, २०७५ | ३:३०:०६ |
काठमाडौं । हुन पनि प्रमुख विपक्षी दलको नेता भएर अहिले शेरबहादुर देउवा ओली सरकारविरुद्ध बोलिरहेका छैनन् । पहिला बातैपिच्छे ‘अधिनायकवादी’ भन्ने उनको मौनतालाई उनकै पार्टीका प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालाले अथ्र्याएका छन्, मिलेमतोका रुपमा ।
शेखरले गतसाता प्रम केपी ओलीसँग भेटेका थिए । शेरबहादुरलाई टक्कर दिने गरी अगाडि आउने तयारीमा रहेका उनले विराटनगर पुगेर कार्यकर्तामाझ त्यो भेटबारे ब्रिफिङ गरेका छन् । ‘सिके राउतको कुरालाई उछालेर कतै केपी ओली संघीयतालाई खारेज गर्नेतिर त जाँदै छैनन् ? किनभने, मैले जे भन्दा पनि केपी सिकेको कुरा निकाल्थे र भन्थे, ल भन्नुुस् त यस्तो प्रबृत्ति भएपछि संघीयता टिक्छ ? सिकेलाई कसले उचालेको छ भनेर पनि सोध्थे ।’ शेखरले सुनाए । उनले केपी र देउवाबीच ट्युनिङ मिलेजस्तो छनक पाएको सुनाए ।
केपीले संघीयता घातक भएको निश्कर्ष निकाल्दैछन् भन्ने छनक शेखरले पाएका रहेछन् । ‘सिकेलाई राज्यले नै संरक्षण गरेर देश विखण्डनतिर जाने भयो भन्दै संघीयता आफैँ भाँड्न त खोज्दै छैनन् ?’ कुराकानीका क्रममा शेखरले भने । केपीले भनेका रहेछन्, ‘हुँदाहुँदा २ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले समेत कर्के नजर लगाउँदैछन् । के त्यो म व्यक्तिलाई गरेको हो र ? सिष्टमलाई च्यालेञ्ज गरेको हो नि † यस्तोमा तपाईंहरुले पनि हामीलाई साथ दिनुपर्छ ।’ आफू अचम्ममा परेको भन्दै उनले सुनाए, ‘एकातिर देउवाप्रति सफ्ट, अर्कातिर संघीयताप्रतिको फ्रस्ट्रेसन । म त अचम्मै परेँ ।’